Warbixinta hormarka dowladda ee todobaadkii tagayHiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Warbixinta hormarka dowladda ee todobaadkii tagay
Muqdisho : HN :– Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Shirka Wasiirada IGAD oo Muqdisho lagu qabtay, Hirgelinta Mashaariic Horumarineed, Horumarka Hirgelinta Nidaamka Federaalka, Horumarka Dalka iyo Hirgelinta Nidaamka Federaalka, Hirgelinta Xafiiska Caafimaadka iyo Fayo Dhowrka, Horumarka Garsoorka Dalka, Digniin loo jeediyey Shirkadaha sida Sharci Darada dalka ku jooga, iyo Dadaalada Nabadeynta Dalka.
Shirkii Wasiirada IGAD oo Muqdisho lagu qabtay
Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Shirka IGAD ayaa yiri “Shirka Wasiirada IGAD ayaa markii ugu horreysey uu Muqdisho ka dhacay muddo 29 sano ka dib, walow 2005tii lagu qabtay Jowhar. 9kii Janaayo 2015 ayey Wasiirada Arrimaha Dibedda ee dalalka ku bahoobay IGAD soo gaareen Muqdisho oo 10kii Janaayo oo maanta ahna ay shirkooda ku qabsadeen Muqdisho. Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Somalia Mudane Abdirahman Duale Beileh ayaa Wasiirada IGAD ku soo dhoweeyey Muqdisho. Dowladda Federaalka ayaa dalalka IGAD uga mahadcelisay ka soo qeybgalkooda iyo is-garab istaagooda, iyadoo arrinkan ay muujineyso horumarka ballaaran ee dalku gaaray. Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa shalay galab kulan la qaatay Wasiirada Arrimaha Dibedda ee IGAD. Ergeyga Gaarka ah ee QM, Ergeyga Gaarka ah ee EU iyo diblomaasiyiin kale ayaa ka qeybgalay shirka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa shirka ka jeediyey khudbad oo uu uga waramay xaalada dalka, horumarka ballaaran oo dhinacyo badan laga sameeyey siiba dhanka amniga, siyaasadda, horumarka dhaqangelinta nidaamka Federaalka. Madaxweynaha ayaa sheegay in Dowladdu ay ka go’antahay sidii dalka loo nabadeyn lahaa isla markaaasna loo gaarsiin lahaa doorashooyin sanadka 2016ka. Wasiirada IGAD oo booqasho labo cisho ah ku jooga Muqdisho ayaa la filayaa inay maanta dib ugu laaban doonaan dalalkoodii.”
Hirgelinta Mashaariic Horumarineed
Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey hirgelinta mashaariic horumarineed ayaa yiri “Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa in muddo ahba waday qorshaha xasilinta dalka iyo sidii gobolada dalka looga hirgelin lahaa mashaariic horumarineed. 4tii January 2015 ayaa Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ay maamulka degmada Kuntuwaarey ee gobolka Shabeelaha Hoose u gudbiyeen qorshaha mashaariic horumarineed oo laga hirgelinayo degmadaas. Wasaaradda ayaa qorsheyneysa in shacabka degmada Kuntunwaarey lagala tashto nooca mashaariicda ay doonayaan si ay mashaariicdaas u noqdaan kuwo hirgala oo dadka deegaanka ay ka wada qeybgalaan. Guddoomiyaha Degmada kuntuwaarey ee gobolka shabeelaha hoose Cabdiraxmaan Sabtow Daahir ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan qorshahaan mashaariicda horumarineed looga fulinayo degmada kuntuwaarey, isagoo u mahadceliyay madaxda Wasaaradda Arrimaha gudaha iyo Federaalka oo isku howshay in la sameeyo mashaariicyo lagu Horumarinayo qaar ka mid ah degmooyinka gobolada dalka. Xoghayaha joogtada ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Dowladda Soomaaliya Dr Ismaciil Jimcaale Calasow ayaa sheegay in ujeedada mashaariicda horumarineed ay yihiin sidii dadka deegaanka loo siin lahaa fursad ay aayahooda uga tashadaan.”
Horumarka Hirgelinta Nidaamka Federaalka
Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka nidaamka Federaalka ayaa yiri “Madaxweynaha Maamul Goboleedka Koofur Galbeed, Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa 3dii Janaayo 2015 ku dhawaaqay qayb kale oo ka mid ah golihiisa wasiirrada iyo iyadoo kulankii wasiirada ee 6dii Janaayo lagu magacaabay Guddiga Amniga Koofur Galbeed oo ka kooban shan wasiir una qaabilsan amniga gobollada Koofur Galbeed, tanoo ujeedadu tahay sidii loo dardargelin lahaa dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Xubnaha wasiirrada la magacaabay oo ka kooban 20 xubnood ayaa lagu soo bandhigay kulan uu ka qayb-galay Shariif Xasan oo lagu qabtay magaalada Baydhabo. Shariif Xasan ayaa horay u magacaabay Afar xubnood oo ka tirsan golihiisa wasiirrada, iyadoo tirada guud ee wasiirrada magacaaban ee maamulku ay tahay 24 xubnood. Tan ayaa ah horumar laga sameeyey dhanka dhaqangelinta nidaamka Federaalka ee Soomaaliya, iyadoo ujeedadu tahay in dadka deegaanka ay aayahooda ka tashadaan.”
Horumarka Dalka iyo Hirgelinta Dhismayaal casri ah
Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka dalka iyo qorshaa dhismaha guryo casri ah ayaa yiri “6dii Janaayo 2015 ayaa Muqdisho lagu soo bandhigay naqshadda deegaan casri ah oo magaalada Muqdisho laga hir-gelinayo, taasoo loogu magac-daray Daaru-salaam City, iyadoo laga hirgelinayo duleedka Waqooyiga ee Muqdisho. Mashruucan oo ah kii ugu horreeyey ee laga fuliyo Muqdisho ayaa waxaa fulinaysa shirkada Al-Buruuj iyadoo uu maalgelinayo Bankiga Salaam Somali. Sheekh C/risaaq Aadan Macallin oo ka mid ah mas’uuliyiinta shirkadda Al-buruuj ayaa soo bandhigay qaab dhismeedka ay yeelaneyso Daaru-salaam City. Deegaankan oo jidka warshadaha u jira 07-km ayaa ka kooban dhismooyin laba dabaq ah, dhismooyin hal dabaq ah iyo dhismooyin fillooyin ah, waxaana uu leeyahay suuq caalami ah, masaajid, iskool, berkedaha dabaasha iyo garoommo lagu ciyaaro kubadaha cagta iyo koleyga. Guddoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, C/kariin Gabeyre ayaa ugu hambalyeeyay shirkadda Al-Buruuj iyo Salaam Somali Bank, waxuuna shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay fursaddan ka faa’iideystaan. Maxamed Cabdi Coloow oo ka mid ah mas’uuliyiinta Salam Somali Bank ayaa sheegay in mar waliba bankigu uu diyaar u yahay inuu bulshada Soomaaliyeed maal-galin u sameeyo, ayna mashaarciidan oo kale ay u hirgeliyaan, isla markaana ay sii wadi doonaan mashaariicda ay ku horumarinayaan adeegyada bulshada Soomaaliyeed.”
Hirgelinta Xafiiska Caafimaadka iyo Faya Dhowrka
Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey furista xafiiska caafimaadka iyo faya dhowrka ayaa yiri “7dii January 2015 ayaa Muqdisho laga furay Xafiiska caafimaadka iyo faya dhawrka ee gobolka Banaadir oo la socon doona xaaladda caafimaad ee goobaha ganacsiga ee ku yaalla caasimada. Agaasimaha Waaxda Caaafimadka ee gobolka Banaadir Dr Cabdullaahi Xasan Maxamed Nuune ayaa sheegay in xafiiskan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay faya dhowrka, isla markaana uu wax tar badan u leeyahay bulshada, isagoo tilmaamay in howlo badan ay horyaallaan. Taliyaha ciidanka deegaanka ee gobolka Banaadir Gashaanle Sare Axmed Xuseen Mahdi ayaa sheegay in ciidanka iyo saraakiisha ka tirsan ilaalinta deegaanka Xamar ay gudan doonan waajibaadka kaga aadan hirgelinta sharuucda xafiiska u degsan. Guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyada ee gobolka Banaadir Mudane Ismaaciil Macalin Cabdi Guure oo furay xafiiska caafimaadka iyo faya dhowrka ee gobolka Banaadir ayaa shegay in xafiiskan uu wax weyn ka tari doono adeegyada sare u qaaidda caafimaadka dadka ku nool Muqdisho, isagoo ku tilmaamay in tani ay tahay tallaabo horumar leh.
Horumarka Garsoorka Dalka
Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka Garsoorka dalka ayaa yiri “Sii hayaha Wasiirka Wasaaradda Caddaaladda iyo Arrimaha Dastuurka Soomaaliya Mudane Faarax sheekh Cabdiqaadir ayaa booqasha ku tagey dalka Turkiga, ka dib markuu ka helay casuumaad rasmi ah dhigiisa Turkiga Mudane Bekir Bozdag. Waxaa booqashadan ku weheliyay Wasiirka ,Xeer Ilaaliyaha Qaranka Dr.Axmed Cali Daahir iyo xoghayaha joogtada ah ee Wasaaradda Hussein Qasim Yusuf iyo Lataliyaal dhinaca sharciga ah. Booqashadan afarta maalmood waxay labada dhinac kawada hadleen sii xoojinta xiriirka labada wasaaradood iyo in Wasaaradda Cadaaladda Turkigu ay ka qayb qaadato dhismaha laamaha Garsoorka Soomaaliya. Wafdiga ayaa booqday laamaha kala duwan ee Garsoorka dalka Turkiga sida Golaha Garsoorka, maxkamadaha, Xeer ilaalinta, kuliyada wasaaradda cadaaladda, iyo goobo kale. Sii hayaha Wasiirka Cadaaladda Faarax sheekh Cabdiqaadir ayaa dadaal dheer ugu jira sidii loo soo celin lahaa adeegga laamaha garsoorka heer federaal iyo mid degmooyinba, iyo waliba dayacrirka xarumaha Garsoorka, tayanta shaqaalaha iyo sidii dib u habeyn loogu sameyn lahaa garsoorka dalka. Waxaa xusid mudan in dawlada Turkiya ay ka qayb qaadanayso dibu dhiska dalka, sida dayactirida xarumaha dawladda, waddooyinka iyo bixinta deeqo wax barasho. Boqashada Wasiirka ayaa sare u qaadaysa saaxiibtinimada Soomaaliya iyo Turkiga oo wixii ka dambeeyay abaarihii 2011kii iyo boqashadii Rajab Dayib Erdogan ee Muqdisho ay gaadhay heerkii ugu sarreeyay balse caawinta Turkiga ee dhanka Garsoorka iyo Maxkamadaha ayaa ah mid u baahan in Soomaaliya ay ka faa’iidaysato si loo helo nidam garsoor hufan oo Soomaaliya ka hana qaada.”
Digniin loo jeediyey Shirkadaha sida Sharci darada ku jooga Soomaaliya
Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey digniinta loo jeediyey shirkadaha sida sharci darada ah dalka uga howlgala ayaa yiri “Wasaaradda Macdanta iyo Batroolka ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si dhaw ula socotaa dhaqaaqa shirkadda ARC oo Shiine laga leeyahay taas oo waayahan danbe si sharci darra ah macdan baaris iyo qodis uga wada Buuraha Simoodi ee Gobolka Awdal. ARC hawlaha sharci darrada ah ee ay wado waxay abuurtay xasilooni darro soo wajahday degaanadaas kadib markii ay qoratay boqolaal meleeshiyaad ah oo ilaalinaya shirkadda iyo shaqaalaheeda islamarkasna ay bara kicisay dadkii iyo duunyadii deegaankaas ku noolaa. Dawladda Soomaaliya waxay walwal ka muujnaysaa, sida horeba u dhacday, in shirkadaha sharci darrada ahi ay qaarkood ku hawlyihihiin inay sun ku aasaan badda iyo barriga Soomaaliya. Si looga fogaado xasarado iyo colaado ka dhaca gobolkaas, wasaaradda Macdanta iyo Batroolka waxay ka dalbanaysa ARC inay si degdeg ah u joojiso macdan baarista sharci darrada ah ee ay wado taas oo dhalisay xasarad siyaasadeed & nabadgelyo oo ka aloosantay deegaankaas oo muddo dheer ahaa meel nabdoon. Dowladda Somalia waxey uga digeysaa dhamaan shirkadaha caalamiga ah ee macdanta iyo shidaalka baara inay galaan heshiisyo sharci darro ah, oo heerkoodu ka hooseeyo habdhaqanka caalamiga oo ay isku dayayaan inay kula soo baxaan khayraadka Soomaaliya, kuna qaataan si rakhiis ah oo aan waafaqsanayn sharciyada dalka iyo xeerarka caalamiga ah ee khuseeya macdan iyo shidaalka. Shirkadda ARC oo dhaqadhaqaaq sharci darro ah ka bilowday Soomaaliya gudaheeda, ayaa ku xadgudubtay shuruucda caalamiga iyo madaxbanaanida waddanka, kuna tumatay midnimada dalka & go’aamada UN ta ee ku wajahan Soomaaliya.”
Dadaalada Nabadeynta Dalka
Sii Hayaha xilka Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey nabadeynta Somalia ayaa yiri “Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 7dii Janaayo 2015 xarunta Madaxtooyada Villa Somalia kula kulmay wafdi uu hogaaminayay Madaxa Amniga iyo Nabadgelyada Midowga Afrika Mr Ismail Chergui. Ujeedada booqashada iyo kulanka mas’uulka Midowga Afrika ayaa ah sidii loo dardargelin lahaa nabadeynta Somalia oo ciidamda Dowladda iyo kuwa AMISOM ay u soo afjari lahaayeen dagaalka lagula jiro kooxaha argagaxisada ah. Sii hayaha Wasiirka Gaashaandhiga Maxamed Sheekh Xasan Xaamud iyo Madaxa Amniga iyo Nabadgelyada Midowga Afrika Ismail Chergui ayaa shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ka dib markii uu soo dhamaaday kulankii Madaxweynaha. Waxeyna sheegeen in laga wada hadlay Xaaladda ammaanka Soomaaliya oo ay iska kaashanayaan Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM. Maxamed Sheekh xasan Xaamud ayaa sheegay in la isku afgartay dar dar gelinta howl galada iyo sidii Midowga Afrika u sii xoojin lahaayeen taageerada Soomaaliya.”